Matongerwo eNyika, 09 Ndira 2020
China 9 Ndira 2020
Ndira 09, 2020
ARTUZ Inopedza Kongiresi Yayo Ichiti Kushandira Mahara Kwete
Kongiresi yeAmalgamated Rural Teachers’ Union of Zimbabwe, ARTUZ, yapetwa muGweru sangano iri richibuda nezvisungo zvakasiyana siyana kusanganisira kusadzokere kubasa kwevarairidzi panovhurwa zvikoro svondo rinouya.
AFDB Inobatsira Zimbabwe neMari Inodarika Mamiriyoni Gumi ekuAmerica
Bhanga reAfrican Development Bank rapa Zimbabwe rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni gumi nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukusimbaradza mabasa ekubhadharawa kwemitero pamwe nekuvandudza mashandiro eparamende pamwe nemahofisi aAuditor-General.
VaChiwenga Vorambidza Mudzimai Wavo Kupinda Mumba neKuona Vana
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga, vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mutongo wedare mushure mekushandisa mauto kudzivirira mudzimai wavo wavari kunetsana naye, Muzvare Marry Mubaiwa, kupinda mumba yavo yekuBorrowdale Brooke sezvakataurwa nedare apo vakapihwa mukana w
Vakawanda Vonyunyuta neKwavanoti Kunonoka kweHurumende Kumisa "Mashurugwi"
Nyaya yezvikwata zviri kurwisa pamwe nekuponda vanhu zvichishandisa mabhemba, izvo zvave kuzivikanwa nerekuti “mashurugwi” yanetsa munyika yose zvichitevera kupararira kuri kuitwa zvikwata izvi mumatunhu ose emunyika.
Ndira 08, 2020
ARTUZ Yoita Kongiresi Yayo VaMasaraure Vachidzoserwa paChigaro Chavo
Kongiresi yechipiri yesangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ARTUZ, yatanga muGweru neChitatu pachiitwa sarudzo yezvigaro zvevamwe vatungamiri uye paine tarisiro huru kubva kunhengo dzakawanda yezvisungo zvakajeka zvekuti matambudziko akatarisana nevadzidzisi munyika ogadziriswa sei.
Paramende Yoronga Kuferefeta Kuurayiwa kweVanhu Munzvimbo Dziri Kucherwa Goridhe
Vachitaura mushure memusangano uyu, sachigaro wekomiti iyi zvakare vachimirira Shurugwi South, VaEdmond Mkaratigwa, vati komiti yavo iri kushushikana zvikiru nekupondwa kuri kuitwa vanhu uye inoda kuziva kuti chii chiri kukonzera izvi.
Vamwe Vanoti VaMnangagwa Havafaniri Kuenda kuZororo Munyika Musina Kumira Zvakanaka
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatanga zororo ravo repagore uye vatevedzeri vavo vachange vachichinjana kubata matomhu pamavhiki matatu VaMnangagwa vanenge vari pazororo.
VaBiti Vanoti Vanopikisa Vacharwa seMvumba Kuti Bumbiro Risavandudzwe
Asi gurukota rinoona nezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, vanoti bato reZanu-PF rakasarudzwa nevanhu nekudaro rine kodzero yekuita madiro pakuvandudza bumbiro.
Vanorwira Kodzero dzeVanhu Voshoropodza Mutemo weSouth Africa Unobata Vapoteri
Mumwe wemitemo mitsva iyi unonzi unorambidzawo vekunze kwenyika ava kushanda mune mamwe mabasa, uyewo uchinzi unoomesera vanenge vachida kunyoresa vana vavo kuti vawanewo hupoteri pamwechete navo.
Iran Inorwisa Mizinda Inogara Mauto eAmerica muIraq
Iran inoti yaita izvi senzira yekutsiva kuurayiwa neAmerica kwakaitwa General Qassem Soleimani svondo rapera.
Ndira 07, 2020
Mamwe Makambani Otadza Kuvhura Gore Rino
Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti haione mamwe makambani achivhura kana kupedza gore rino sezvo hupfumi hwenyika hwaramba hwakaita mhidigari.
Mitumbi yeVashandi veZim Parks Inowanikwa muLake Kariba, Yoongororwa Chakaita Kuti Vashaye
Mutauriri weZim Parks, VaTinashe Farawo, vanoti mitumbi yaVaTimothy Tembo naVaChidhumo Mabharani yakawanikwa munguva dzakasiyana, wekutanga uchiwanikwa munguva dzemangwanani, mumwe wacho uchizowanikwa masikati.